သင်၏အီးမေးလ်အကောင့်များအားလုံးကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ Gadget သတင်း
Villamandos | | လဲ tutorial
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တွင်စာရင်းတစ်ခုရှိသည် အီလက်ထရောနစ်စာပို့ ၎င်းသည်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ရသည့်အခွင့်ထူးခံအနည်းငယ်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်များစွာပြောင်းလဲသွားပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကွန်ရက်များ၏ကွန်ယက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရာများမှသာမကမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏ကျေးဇူးကြောင့်မည်သည့်နေရာမှမဆိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိရင်၊ အကယ်၍ ငါတို့ကရှာဖွေမယ်ဆိုရင်အီးမေးလ်လိပ်စာမရှိဘဲလူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်။
သို့သော်ယခုမြင်ကွင်းတွင်ပေါ်လာသည့်ပြproblemနာမှာအီးမေးလ်အကောင့်အမြောက်အများရှိခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့မသုံးသောကိစ္စရပ်များနှင့်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျက်သိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤအရာအလုံးစုံတို့အတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ရှင်းပြတော့မည် ဂျီမေးလ်၊ Yahoo (သို့) ဟိုက်မေးလ်မှအမြန်ဆုံးဖြစ်စေ၊ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်အကောင့်အားလုံးကိုဘယ်လိုဖျက်ပစ်မလဲ.
2 Hotmail အီးမေးလ်အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖျက်ရမလဲ
3 Yahoo mail account ကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
4 AOL အီးမေးလ်အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖျက်ရမလဲ
ယနေ့တွင် Gmail သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည် ဘယ်မှာသင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောအီးမေးလ်လိပ်စာနိုင်ပါတယ်။ ၀ န်ဆောင်မှု၏ပိုင်ရှင်ဂူဂဲလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်ကိုဖျက်ရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်၊ ဖြစ်ရပ်အားလုံးနီးပါးကဲ့သို့သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုသင်လိုက်နာရမည်။
စာမျက်နှာသို့ဝင်ပါ အကောင့် ဦး စားပေးမှုများ
ယခု option ကိုနှိပ်ပါ ထုတ်ကုန်ကိုဖယ်ရှား။ များသောအားဖြင့်သင်၏အကောင့်ထဲသို့လုံခြုံရေးအတိုင်းအတာအဖြစ်ပြန်ဝင်ရမည်
Gmail ပြီးလျှင်, Delete option ကိုနှိပ်ပါ
အခုဆိုရင်သင်ဟာ Google service မှသင်၏အီးမေးလ်အကောင့်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားရန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမည်
Hotmail အီးမေးလ်များကိုအများဆုံးအသုံးပြုသောအချိန်တစ်ချိန်ကအထူးသဖြင့် WhatsApp ဖြစ်သော Messenger application ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နည်းသည်ထက်များပြီး Microsoft က Outlook.com အီးမေးလ်အကောင့် (ယခင် Hotmail) ကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်။
အထူးသဖြင့်သူတို့က Messenger application ကိုသုံးခွင့်ပေးလို့ပါ, ပထမ ဦး ဆုံး WhatsApp ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နည်းသည်ထက်များပြီး Microsoft က Outlook.com အီးမေးလ်အကောင့် (ယခင် Hotmail) ကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်။
သင်၏ Hotmail အီးမေးလ်အကောင့်ကိုအမြဲတမ်းဖျက်ပစ်ရန်၊ သင်သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။
Access ကို မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အကောင့်ဝန်ဆောင်မှု (ယခင်က Microsoft Passport Network ဟုလူသိများသည်) နှင့်သင်ဖျက်လိုသည့်အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ
အခုဆိုရင်သင်မျက်နှာပြင်မှာပြထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးအပေါ်ကပုံမှာမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့ကိုသင်သေချာဖတ်ရှုရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာမဟုတ်လျှင်သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်အကောင့်နှင့်အီးမေးလ်များကိုသာမကမှားယွင်းစွာဖျက်ပစ်နိုင်သည်သာမကဥပမာ၊ Drive တွင်သိမ်းထားသောဖိုင်များလည်းပါရှိသည်။
ပြီးတာနဲ့ငါတို့အဆုံးရ သင့်အကောင့်ကိုအပြီးတိုင်ဖျက်ရန်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကရက် ၆၀ စောင့်ရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ပြောင်းလျှင်၊ ထိုအချိန်ကာလ၌သင်ထပ်မံဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်ပြီးအကောင့်ပိတ်သိမ်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းသင်ထပ်မံဝင်ရောက်ခြင်းမရှိပါက Redmond သည်သင်၏အကောင့်ကိုအပြီးအပိုင်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
Yahoo mail account ကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
မကြာသေးမီက Yahoo! ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင် ဦး ဆောင်နေသည့်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူအမြောက်အများမှာ @ yahoo.es သို့မဟုတ် @ yahoo.com နှင့်အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုရှိကြသည်။ လောလောဆယ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးသည်အကောင်းဆုံးကာလကိုဖြတ်သန်း။ မရပါ သုံးစွဲသူများသည်အခြားပလက်ဖောင်းများသို့ထွက်ပြေးနေကြသည်။ ဤချီတက်ပွဲအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာအနက်တစ်ခုမှာလုံခြုံရေးကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အတွေ့အကြုံနှင့် ၂၀၁၆ အထိအသုံးပြုသူများအား ၀ န်မခံပါ။
သင်၏ Yahoo email account ကိုပိတ်ရန်သင်သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။
သင်၏ login mode သည်မိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင် Yahoo အကောင့်တစ်ခု၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပိတ်ထားသောစာမျက်နှာသို့မဟုတ်အထူးအကောင့်ပိတ်ခြင်းစာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ပါ
သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုရိုက်။ အပေါ်နှိပ်ပါ အကောင့်ပိတ်ပါ။ သင်တစ် ဦး captcha ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ဖျက်ခြင်းကိုအတည်ပြုရပေမည်
AOL ၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအများစုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အား AOL ဝန်ဆောင်မှုများကိုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသည်။
AOL အကောင့်တစ်ခုကိုဖျက်ရန်သင်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည် အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း
သင်ပုံမှန်အသုံးပြုသည့် username နှင့် password ကိုဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် AOL ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်သင့်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ပါ
ယခုသူတို့သည်သူတို့ကျွန်ုပ်တို့အားမေးသောလုံခြုံရေးမေးခွန်း၏အဖြေကိုရိုက်ထည့်။ "Continue" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
"Service Options" အပိုင်းရှိ "Manage my AOL gutter" ကိုရွေးပါ
အခုဆိုရင် Cancel ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ၊ အဲဒီမှာ drop-down menu ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ account ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် "Cancel AOL" ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီးသင်၏အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အီးမေးလ်အကောင့်အရေအတွက်ပိုများလာခြင်းနှင့်စီမံခြင်းပြုလုပ်တိုင်းသင်အမှန်တကယ်မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုစဉ်းစားပြီးသင်မသုံးတော့သောအရာအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာလူကြိုက်အများဆုံးအီးမေးလ်အကောင့်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့သော့တွေပေးထားတယ်၊ ဒါကြောင့်အလုပ်စတင်ဆင်းသွားပြီးသင့်ရဲ့အီးမေးလ်အကောင့်အရေအတွက်ကိုလျှော့ချပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » သင်၏အီးမေးလ်အကောင့်များအားလုံးကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
မာရီယာ Olmo ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ဆောင်းပါးသည်အလွန်ကောင်းသော၊ အလွန်အသုံး ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်အနေဖြင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိသောအကောင့်တစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းရန်အခွင့်အရေးယူခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီ site ကိုအကောင့်တစ်ခုဘယ်လိုဖျက်ပစ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းရှာဖွေခဲ့တယ် http://www.eliminartucuenta.com
María Olmo အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ aol အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းရန်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။
ငါ username နှင့် password ကိုအတူရိုက်ထည့်ပါကမကျင့်